Britain oo ku gacansayrtay hadal ka soo yeeray Donald Trump - BBC Somali
Image caption Mr Nigel Farage iyo Donald Trump waxay ku kulmeen New York ka dib amrkii Trump la doortay
Mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Britain ayaa ku gacan seyray baaq ka soo yeeray Donald Trump oo dowladda Britain ka dalbaday inay wakiilkeeda Washington u magacowdo Nigel Farage oo hormuud u ahaa kooxdii ka dambeysay ololaha ay Britain uga baxeyso Midowga Yurub.
Xafiiska ra'iisul Wasaaraha Britain ayaa sheegay in jagadaasi hadda aysanba banaanayn.
Trump ayaa hadalkan ku qoray bartiisa Twiteer-ka. "Dad badan ayaa jeclaan lahaa inay arkaan Mr Farage oo ah wakiilka Britain u qaabilsan Maraykanka. Shaqo adag ayuu qaban lahaa", ayuu qoray Donald Trump.
Nigel Farage waxa uu ku eedeeyay dowladda Britain inay nacaybka ay isaga uqabto ay ka hormarisay waxa uu ugu yeeray 'danaha qaranka'.